लेखक Mihail Uspensky: जीवनी
प्रसिद्ध रूसी लेखक मिखाइल Uspensky हालै यो संसारमा बाँकी। उहाँले मात्र 64 वर्ष बस्थे। तर धेरै पढ्न अझै छ कि आफ्नो पुस्तकहरु थिए।
को जीवनी देखि तथ्य
भविष्यमा लेखक, Uspenskiy Mihail Glebovich, 1950 मा बर्नाउल, को Altai पुरातन शहर मा जन्म भएको थियो। जवान धेरै प्रारम्भिक साहित्य को लागि एक स्वाद र आफूलाई यस दिशामा महसुस गर्न इच्छा प्रकट गर्नुभयो। माइकल मात्र सत्र वर्ष पुरानो गरिएका जब आफ्नो पहिलो कवितात्मक प्रकाशन, प्रान्तीय periodicals मा आयोजित थियो। यो धेरै हदसम्म आफ्नो भविष्य क्यारियर निर्धारण गरिन्छ।
व्यावसायिक मिखाइल Uspensky इर्कुत्स्क को विश्वविद्यालय, साइबेरिया मा पुरानो र सबै भन्दा सम्मान शैक्षिक संस्थाहरू मध्ये एक को पत्रकारिता को संकाय मा प्राप्त।
सफलता सडक शायद सजिलो छ। मिखाइल Uspensky, पहिचान, जो आज गर्दै छन् र साहित्यिक समुदाय, र पाठकहरूलाई व्यापक दायरा पुस्तकहरू, लेखकले आफूलाई 1988, आफ्नो पहिलो पुस्तक प्रकाशित भएको छ क्रास्नायार्स्क हुँदा सम्म आयोजित महसुस - "। दुष्ट आँखा" छोटो कथा एक संग्रह पहिले ज्यादातर साइबेरियन periodicals मा गहन काम, अनौठो जब र दुर्लभ प्रकाशनहरू, धेरै वर्ष भएको। तर पुस्तक बाट कथाहरू राम्रो प्राप्त र साधारण पाठकहरूलाई र साहित्यिक आलोचक छन्। तिनीहरूलाई को केही स्वतन्त्र जीवन बिताउन थाले - तिनीहरूले पप कलाकार संवादी विधा संग प्ले। यो लेखक थप रचनात्मकता लागि राम्रो उत्तेजना लागि पहिलो प्रमुख सफलता थियो। र विज्ञान कल्पना तिर आफ्नो रचनात्मक शक्तिहरु को सदिश को दिशा परिवर्तन गर्ने क्षमता, गर्न साथै सामान्यतः के शब्द "कल्पना" द्वारा denoted छ। जबकि विधा एक व्यापक साहित्यिक घटना थियो। सार्वजनिक मात्र Tolkien को क्लासिक काम थाह गर्न सुरु गरिएको छ।
विधा संश्लेषण र अर्थ विविधता
Sam मिखाइल Uspensky, आलोचकहरु भन्दा अक्सर कल्पना बुझाउँछ जो एक पुस्तक, साहित्य को विधाहरू बीच स्पष्ट सीमाहरु पहिचान गर्न इन्कार गरे। यो अलग, लेखक अनुसार, एकदम प्रारम्भिक आवेग को क्षमता लेखक कागज को खाली पाना खोल्छ वा किबोर्ड छुन जो संग रचनात्मकता कम। विभिन्न विधाहरू एक संश्लेषण सृष्टिकर्ता, पहिले अज्ञात expressive सम्भावनाहरू लागि पूर्णतया नयाँ अप खुल्छ। यी सिद्धान्तहरू को embodiment छ र नजिकिंदै कसरी Uspensky मिखाइल यसको एक विशिष्ट प्रतिनिधि त घरेलू कल्पना सबैभन्दा स्पष्ट नै प्रकट भएको छ। सबै लेखक र तिनीहरूले स्पष्ट कल्पना र परिष्कृत घर दैनिक बीच, कल्पना र वास्तविकता बीच सीमाहरु छैन कि विशेषता।
तिनीहरूले रोचक र विचारशील रिडर षड्यन्त्र र अप्रत्याशित षड्यन्त्र twists प्रेम गर्ने हो, यी गुणहरू छ। सबैभन्दा पाठकहरू बीच लोकप्रिय यस्तो उपन्यास Mihaila Uspenskogo, "मार्च ekleziastov" "राक्षस को आँखा मा हेर" र जस्तै प्रयोग गर्नुहोस्।
विज्ञान कथा को समुदायमा
कुनै पनि लेखक गरेको राम्रो उहाँले पढ्न र आफ्नो काम गर्न सम्बोधन गर्दै जो सार्वजनिक, बुझेका भनेर हेर्न। तर पनि अधिक एकदम - सँगी नै दिशा मा काम लेखकहरूले देखि पहिचान प्राप्त पाठकहरूलाई को ध्यान लागि प्रतियोगिहरु गर्न। यो अर्थमा Mihail Uspensky, सुखी मानिस थिए - साहित्य को मनपर्ने विधा आफ्नो सेवाहरू थिए उच्चतम स्तर मा विज्ञान कल्पना लेखकहरू समुदायमा फेला परेन। बोरिस Natanovich Strugatsky - पछाडि 1993 मा उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत पुरस्कार विधा सबैभन्दा विशिष्ट Luminary सम्मान। "कांस्य घोंघा" भनिन्छ आदरणीय regalia। र त्यो छैन मात्र थियो। यसबाहेक, बोरिस Strugatsky मध्यान्ह को विश्व बारेमा क्लासिक उपन्यास को चक्र जारी राख्न सहयोगी को हाइरार्खीमा आफ्नो कान्छो उमेर र स्थिति दिनुभएको छ। कथा यो "सर्पले गरेको दूध" भनिएको छ। यो पुस्तक Strugatsky भाइहरू बाट विषयवस्तुहरू र वर्ण जारी छ।
र पूरा हुन मिखाइल Uspensky सक्ने अन्तिम महत्त्वपूर्ण काम, उपन्यास "Bogatyristika Zhikhareva हड्डी" भयो। यो स्लाव भाषाहरु विषयहरू मा कल्पना विधा मा एक पुस्तक हो। यसलाई व्यापक रूसी लोक Tales र प्राचीन स्लाव भाषाहरु epics को वर्ण प्रतिनिधित्व छ।
साहित्यिक तस्बिरहरू को संसारमा सबै लापरवाह गोता संग मिखाइल Uspensky रूसी समाजमा तीव्र सामाजिक संघर्ष र सामाजिक र राजनीतिक प्रक्रियाहरू देखि रहन सकेन टाढा। राजनीतिक नापसंद र विरोधाभास को विशेष उच्च डिग्री गर्मी संसदीय र राष्ट्रपति चुनावमा 2011-2012 को जाडो पुग्यो। यी दिन माइकल अक्सर विरोधको rallies र marches मा देख्न सकिएन। उहाँले देशमा विद्यमान राजनीतिक शासन को र्शतहीन विरोधीहरूले एक थिए। यस मामला मा, पनि एक सानो बिट आफ्नो साहित्यिक काम धारणा मा आश्चर्य माइकल कि लगभग कहिल्यै आफ्नो राजनीतिक leanings बुझाउँछ।
कथा "पीत सूटकेस को साहसिक": एक सारांश। "पीत सूटकेस को साहसिक": प्लट र नायक को वर्ण
Olbi Edvard - जीवनी र काम
Lermontov, "Ashik Kerib"। सारांश कथा
कसले Mephistopheles संग एक सम्झौता निष्कर्षमा? Faust र Mephistopheles
उपयुक्त राइम शब्द "राम्रो"
"Eragon। Brisingr, "क्रिस्टोफर Paolini (कल्पना): केन्द्रीय वर्ण, प्लट
सुझाव र चाल - कसरी गुलाब एक फूलदान मा राख्न
दर्जा भिटामिन को जीव को व्यक्तिगत आवश्यकता आधारमा
हाइपनोटिक "Andante": प्रयोगको लागि निर्देश
स्विडिश सेना: आकार, उपकरण, फोटो
र के सपना छ? बिल्ली को बच्चा र बिरालो - मतलब?
बच्चाहरु संग बाली मा आराम गर्न कहाँ राम्रो?
घरमा फोन मा ग्लास कसरी पोलिस गर्न
को रंग Boulevard मेनू, फोटो र समीक्षा मा रेस्टुरेन्ट
मौका लागत र आफ्नो कारण